नेपाल आज | ओली लेण्डुप बन्न लागे, देउवा सुतेकै छन्
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई सिक्किम बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । दक्षिणी छिमेकीको गोटी बनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बिखण्डनको नारा बोकेको सीके राउतलाई उच्च महत्व दिएको, राजनीतिक लक्ष्य बोकेको नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको, बिदेशीलाई नागरिकता दिन सहज हुने किसिमले नागरिकता बिधेयक ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन बिघटन हुनु पर्थ्र्यो
नेपाल आजसंगको बिशेष साक्षात्कारमा नेता गुरुङले स्वतन्त्र मधेश गठवन्धन भन्ने संगठनसंग गृहमन्त्रीले हस्ताक्षरसहित सहमति गर्नु नै त्रुटीपूर्ण रहेको औंल्याए । सहमतिको एक नम्बरमा सो गठवन्धन बिघटन भएको घोषणा गरिन्छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा उल्टो गठवन्धनको हैसियत झन उच्च पार्ने गरी लेखिनु दुर्भाग्य भएको बताए ।
जनमतसंग्रहलाई मान्यता दिइयो
नेता गुरुङले सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक बिधि भन्ने शब्दावलीले जनमतसंग्रह नै भन्न खोजेको दाबी गरे । हरेक पाँच बर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनका लागि यस्तो भाषा प्रयोग नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ पाँच–पाँच बर्षमा हुने आवधिक निर्वाचन हो भने यस्तो लेखिरहनु पर्छ ? सिधै आवधिक निर्वाचनमार्फत भन्न सकिदैन ?’
११ बुँदे सहमतिपछि राउत र उनका कार्यकर्ताले जनकपुरमा सहमतिको उल्लंघन गरेको र योक्रम अहिले पनि जारी रहँदासमेत सरकार मौन बस्नु रहस्यमय भएको उनको तर्क छ । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न राउतसंग प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमको मिलेमतो रहेको गुरुङको दाबी छ ।
नेता गुरुङले संसद्मा प्रस्तुत भएको नागरिकता बिधेयक, सीके र बिप्लव प्रकरण एक अर्कासंग अन्तरसम्बन्धित रहेको जिकीर गरे । बिदेशीलाई नागरिकता दिएर बस्तविक नेपालीलाई अल्पमतमा पारी अन्ततः नेपाल निल्ने षडयन्त्र अन्तर्गत यो भैरहेको उनको दाबी छ ।
अहिलेको नागरिकता बिधेयकमा बिदेशीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन निकै खुकुलो प्रावधान राखेको छ । यसले तिब्बती, रोहिंग्या र हजारौं भारतीय नागरिकले सहजै नागरिकता पाउने उनी बताउँछन् । यो सबै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भैरहेकाले उनलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी भैसकेको गुरुङ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ प्रधानमन्त्री ओली यति गम्भीर बिषयमा पनि किन आफनो पार्टीमा छलफल चलाउँदैनन् ? किनभने छलफल गर्दा बिरोध हुन्छ, निर्णय गर्न सकिदैन । उनी गुपचुप बिदेशीको इशारामा काम गरिरहेका छन् । ’
कांग्रेसको नेतृत्व नै भएन
मुलुकमा यति गम्भीर मुद्दाहरु भएकाबेला कांग्रेस जस्तो पार्टी सुतेर बस्नु नेतृत्वको कमजोरी भएको उनी स्वीकार गर्छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले तुरुन्त आकस्मिक बैठक बोलाई छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा कहिले के ...कहिले के बोलेर हिंड्नु मुलुककै लागि घाटा भएको गुरुङ बताउँछन् ।
‘पार्टीमा महासमिति बैठकका निर्णयसमेत स्वीकार नगरिएकाले अब बिशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन । ’ गुरुङ बताउँछन् ।